Trident inoenda Linux. Iyo yakatorwa yeChokwadi OS kubhejera pane iyo penguin | Linux Vakapindwa muropa
Trident inoenda Linux. Sangana neyokutanga distro ye2020
Trident ichave yakavakirwa pane yakazvimirira yekuparadzira Void.
Trident inoenda Linux. Muteveri wadhiyabhorosi akabatana neiyo penguin inogona kunge iri zano rakakura reBatman sequel, asi kwenguva iyo yainovimbisa kuve imwe yeakanyanya kuvhurwa sosi zvinyorwa zve2020. Uye nhau dzinogamuchirwa tichifunga izvo sekunyora kwandakaita pakutanga kwegore, hapana chinonakidza chinoitika paLinux zvekare.
1 Uri kutaura nezvei Diego?
2 Tsananguro yekuti nei Trident iri kutamira kuLinux
3 Uye ndeupi kugoverwa kweLinux kwavanozoenderana nako?
Uri kutaura nezvei Diego?
Ngatitangei pakutanga. BSD yaive mutauro wechirongwa zvichibva pakodhi yekodhi kubva kuBell Labs. Siwe kukura kwaive pamusoro peyunivhesiti yeBekerley. Makore gare gare, Bell Labs yakavhara kupinda kune yayo kodhi. Mukupindura izvi, yunivhesiti yakashandura yayo yega sisitimu yekuita kuti ive Unix-senge.
Cherechedza: Vanoverenga zvakadii vaverengi vaviri; BSD yaive sisitimu yekushandisa, kwete mutauro wechirongwa. Mukuzvidzivirira kwangu, ndiri kutora dzihwa uye pepa racho rinokurudzira kusaitisa kana kunyora zvinyorwa paLinux.
Pahwaro hweBSD mamwe akavhurwa sosi anoshanda masisitimu akaonekwa, imwe yacho iri FreeBSD. Sezvo nguva yakafamba, PC-BSD yakabuda. PC-BSD inonyepedzera kunge iri FreeBSD izvo Ubuntu kana Linux Mint kuDebian kana Manjaro kuArch Linux. Mune mamwe mazwi, ine hushamwari vhezheni ine yakawanda yekushandisa graphic installers ichienzaniswa neyaamai kugovera.
Munguva pfupi yapfuura, ivo vanogadzira PC-BSD vakafunga kumira kutarisa kune wekupedzisira mushandisi uye kuzvipira ivo pachavo kumaseva uye kushanda sehwaro hwekuvaka migove. Iyo purojekiti yakapihwa zita rekuti TrueOS. Asi, sezvo paive nevanhu vaive vachiri kuda hushamwari xBSD kugoverwa, iyo Trident chirongwa chakazvarwa. Trident (trident) chishandiso icho dhiabhori anacho muruoko rwake mukumiririra kwepakati, uye dhiabhori ndiye mascot anozivikanwa neFreeBSD.
Sezvo ndatsanangura zvese zvaunoda kuti uzive (kana chinhu chega chandiri kukwanisa kutsanangura) ngatirambei nenyaya yacho.
Tsananguro yekuti nei Trident iri kutamira kuLinux
Ndinoda kujekesa izvozvo kune dzimwe shanduro dzakanaka dzeFreeBSD seGhostBSD. Asi ivo vanogadzira iyo Trident chirongwa usafunge kuve uchivakirwa paFreeBSD seyakafanira mamiriro nekuvapo kwayo. Mumashoko ake amene:
Chinangwa cheProjekti Trident ndechekuvandudza mashandisirwo ehurongwa hwekushandisa sechi graphical workstation kuburikidza nemhando dzese dzezvinoreva: zvigadzikiso zvetsika, otomatiki ekugadzirisa maitiro, graphical utilities, nezvimwe.
Nei FreeBSD uye TrueOS isiri kuvashandira? Ivo zvakare vanoitsanangura muchiziviso:
Kwemakore, takaunganidza matambudziko mazhinji neFreeBSD sisitimu inoshanda. Matambudziko aya zvine chekuita nekuenderana kwe Hardware, kutaurirana zviyero, kana kuwanikwa kwepakeji uye ivo vanoramba kudzikisira vashandisi veProjekti Trident. Mushure memakore mazhinji ekumirira mhinduro, zvinoita sekunge pasina kugadziriswa kumusoro. Kuti tirambe tichiedza kuzadzisa zvinangwa zveprojekti, isu taifanirwa kutora danho rakaomarara rekuchinja tarisiro yedu toenda kune yekushandisa iyo inokodzera zvirinani kune izvo Project Trident iri kuyedza kupa vashandisi vedu.
Pano zvakakosha kusimbisa mamwe mapoinzi.
FreeBSD yakasimba uye yakachengeteka server inoshanda sisitimu. Vamwe vanoti mukuvaka, mashandiro uye maficha zviri nani kupfuura Linux. Zvino, kana iwe ukashandisa chero kupi kugoverwa kwoushamwari, iwe unogona kunge wakazviona izvo mukushanda ndizvo zvaive zviri Ubuntu muna 2006. Y, cNemazhinji asiri eWindows uye MacOS zviwanikwa zvinotarisana neLinux, hapana tariro yakawanda yekuti izvi zvichachinja.
Uye ndeupi kugoverwa kweLinux kwavanozoenderana nako?
Kana iwe waifunga kuti tichave neimwe distro iyo yakatendeka kopi yezvakanyanya, asi riine rimwe zita uye Wallpaper, iwe uchave unoshamisika. Iyo base distro ichave isina Void Linux. Void linux Yakavakwa kubva pakutanga uye haishandise systemd senzira yekutanga. Iyo zvakare ine yayo pacheji maneja.
Nekuenda kuLinux, Trident inotarisirwa kuzadzikisa izvi kuvandudzwa:
Dzazvino shanduro dzekushandisa.
Tsigiro iri nani yemifananidzo uye makadhi ezwi.
Rutsigiro rwuri nani rweWiFi uye kuwedzera kwekutsigirwa kweBluetooth.
Nezvikonzero zviri pachena, iyo nyowani vhezheni haizoenderana neyakambopfuura, saka ichafanirwa kuiswa ne default.
Izvo zvisiri pachena ndezvekuti kana Trident ikaenda kuLinux ivo vacharamba vachishandisa chiedza, iyo isingaremi uye inogadziriswa desktop yakagadzirwa panguva yePC-BSD. Ini ndinofungidzira tichafanirwa kumirira kusvika Ndira 2020 kuti tizive
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Trident inoenda Linux. Sangana neyokutanga distro ye2020
Mutauro wekuronga ??
Inoshanda system. Ini ndinofanirwa kunge ndakaita kusangana kwemazano ne 'source code uye ndosaka ndaisa programming mutauro.
BSD haisi mutauro wechirongwa, inzira yekushandisa.
Pindura kuna Os
Hongu ndizvozvo. Ndinogadzirisa.
Feral Inopindirana inozviita zvakare: Mumvuri weTomb Raider iri kuuya kuLinux munaNovember 5
EndeavorOS inoramba ichienderera kumberi, Gumiguru kuburitswa kunosvika neLinux 5.3.6